Matongerwo eNyika, 19 Kurume 2019
Chipiri 19 Kurume 2019
Vanhu vakasangana nedambudziko remafashamu emvura kumatunhu eChimanimani nekuchipinge vari kuchema chema nenyaya yekuti vawanirwe zvekudya, zvekufuga, uye mishonga kune vanorwara.
Mumiriri weManicaland muParamende, Amai Karenyi, Vokumbira Rubatsiro paCyclone Idai
Vanhu makumi mana nevashanu pavanhu makumi mapfumbamwe nevasere vakafa mutsaona yemvura yakakonzerwa nedutumupengo Cyclone Idai, vanonzi vavigwa kusvika pari zvino kuChimanimani, mudunhu reManicaland.
Mumwe Mudzidzisi Ofa Mushure Mekuyeredzwa neRwizi
Mumwe wevakashaya ava mudzidzisi VaRobert Manono vakayeredzwa nemvura kuChipinge vachibva vazoonekwa vakashaya.
Dutumupengo Idai Rouraya Vanhu Makumi Mapfumbamwe neVasere
Vanhu vanosvika makumi masere nevapfumbamwe vafa kuChipinge neChimanimani uye kuMasvingo nekuda kwedutumupengo remafashamu emvura nemhepo kana kuti tropical Cyclone Idai.
Zvirwere zveManyoka Zvotarisirwa Kuwedzera Kunzvimbo Dzakaparadzwa neDutumupengo
Mukuru mubazi rezvehutano Dr Robert Madyiradima vanoti huwandu wezvirwere zvemanyoka huchawedzera munzvimbo dzakaparadzwa nedambudziko renemafashamu emvura nemhepo kana kuti Tropical Cyclone Idai sezvo kusina mvura yekunwa yakachena kune dzimwe nzvimbo uko kusiri kusvikika parizvino.
Mutungamiri weMDC, VaChamisa Vokurudzira Veruzhinji Kuti Vabatsire Vakavirwa neDambudziko reMvura
Mutungamiri webato rinopikisa, reMDC, VaNelson Chamisa, vashanyira dzimwe dzenzvimbo dzakavirwa nedambudziko redutumupengu Cyclone Idai kuChimanimani neChipinge kuti vazvionere vega kuparadzwa kwakaitwa nzvimbo idzi nemvura iyi.
VaChamisa Vokurudzira Vanhu Kuti Vabatane Mukubatsira Vakawirwa neDambudziko reDutumupengo
Mutungamiri webato rinopikisa VaNelson Chamisa vati vari kutsvagawo rubatsiro rwekubatsira vanhu vawirwa nedambudziko redutumepengo remafashamu emvura nemhepo reTropical Cyclone Idai.